जहाँ सुर्य कहिले पनि अस्ताउदैन त्यहाँ मुस्लिमहरुले कसरी राख्छन रोजा ? जान्नको लागि पुरा पढ्नुहोस.. - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»जहाँ सुर्य कहिले पनि अस्ताउदैन त्यहाँ मुस्लिमहरुले कसरी राख्छन रोजा ? जान्नको लागि पुरा पढ्नुहोस..
जहाँ सुर्य कहिले पनि अस्ताउदैन त्यहाँ मुस्लिमहरुले कसरी राख्छन रोजा ? जान्नको लागि पुरा पढ्नुहोस..
By मनिषा थापा on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:१७ रोचक खबर
पिएनपिखबर, भक्तपुर : यो महिना रामजानको लागि पवित्र महिना मानिन्छ। यस महिनाभरि मुसलमानहरुले रोजा राख्ने गर्छन। रोजाको समय निरहार ब्रत बस्ने गर्छन। सुर्य नअस्तौनी बेलासम्म आफ्नो व्रत तोड्दैनन। भिष्ण गर्मीको समय रोजा राख्न मुसलमानको लागि कठिन हुन्छ। तर के तपाईले यस्तो ठाउँको बारे सुन्नु भएको छ जहाँ सुर्य कहिले पनि अस्ताउदैन त्यहाँ मानिसले कसरी राख्छन रोजा ?
विश्वभर नै सुर्य उदाएपछि अस्ताउने गर्छ तर यस ठाउँमा सुर्य ५५ मिनेटको लागि मात्र अस्ताउँछ। यस्तो ठाउँमा मानिसले कसरी राख्ने गर्छन रोजा, जान्नुहोस…..
शायद तपाईले यस बारेमा थाहाँनहुन सक्छ कि आर्क्टिक सर्कलमा रहेको देशहरुमा २४ घण्टा घामको प्रकाश रहन्छ। यस्तोमा कसरी नमाज पढ्ने, इफ्तार गर्ने कहिले तरावीह गर्ने यी सबै कसरी गरिन्छ त्यस बारे जान्नु निकै चाख लाग्दो कुरा छ।
फिनल्याण्ड र स्वीडेन ती देशहरु मध्य हो जसमा सुर्य धेरै कम समयको लागि अस्ताउने गर्दछ। फिनल्याण्डमा रहने मुसलमानहरुको जनसंख्या त्यहाँको ५.५ मिलियन आवादीको लगभग ३ प्रतिशत छ।
स्वीडनमा ६ लाख मुस्लिम आवादी बस्ने गर्छन। फिनल्याण्ड हजारौ जिल्ला र आइल्याण्डबाट सजिएको सुन्दर देश हो। वर्षको ३६५ दिनहरु मध्य गर्मीको मौसममा मात्र ७३ दिनसम्म घाम आफ्नो प्रकाश छर्ने गर्छ। दक्षिण फिनल्याण्डको गर्मी याममा ५५ मिनेट मात्रै घाम डुब्ने गर्छ। रोजा २३ घण्टा ५ मिनेटको हुन्छ।तर रोजा बिहान १:३५ देखि रातको १२:४० बजे खतम हुने गर्छ।
जहाँ सुर्य अस्ताउदैन त्याहाँका मानिसले एक उपाय बनाएका छन्। उनीहरु समयको हिसाबले रोजा गर्ने गर्छन। केहि मुस्लिम ल्यापल्याण्डमा रहने भएकाले उनीहरु मध्यपुर्वको समयलाई आधार मान्ने गर्छन।
सबै देशमा सुर्य उदाउने र अस्ताउँने समय भिन्न-भिन्न हुने गर्छ। एकै समय एकै देशमा पनि कतिपय ठाउँमा फरक-फरक समय हुनपनि सक्छ। जसले गर्दा समयमा थोरै अन्तर पनि हुनसक्छ।